Kianja lehibe indrindra any Espaina: Avy any Oriente mankany Fórum | News Travel
Louis Martinez | 12/05/2022 15:00 | España, mpitarika
Rehefa miresaka momba ny kianja lehibe indrindra any Espaina, ny fakam-panahy voalohany anay dia ny nanao izany avy amin'ireo kianja lehibe maro izay mameno ny firenentsika. Na izany aza, hanao fahadisoana isika satria tsy izy ireo no lehibe indrindra.
Eny tokoa, manana ny sasany i Espaina kianja lehibe mahafinaritra feno tsangambato sy tantara. Tena tsara tarehy izy rehetra, na dia tsy maintsy asongadinay aza ianao ny tsy manan-tsahala Salamanca na ny tsy latsa-danja amin'ny tsara tarehy Madrid. Toy izany koa, afaka milaza aminao momba ny hafa izay manetry tena kokoa, nefa sarobidy, toy ny Chinchon onja an'ny Almagro. Na izany aza, te hiresaka aminao momba ny kianja lehibe indrindra any Espaina izahay ary tsy misy na iray aza amin'izy ireo. Izy ireo no hasehonay anao.
2 Kianjan'ny Colon (Madrid)
3 Kianjan'i Espaina (Madrid)
4 Kianjan'i Espaina (Barcelona)
5 Plaza de Oriente (Madrid), mihoatra ny iray amin'ireo kianja lehibe indrindra any Espaina
6 Plaza de Espaina (Seville)
7 Ben'ny tanànan'i Medina del Campo
Kianjan'ny Forum, any Barcelona
Tsy tokony hampidirina amin’ny fitetezam-paritra ataontsika koa io toerana malalaka io, satria antsoina koa hoe Forum Park. Tsy kisendrasendra izany, satria manana 160 metatra toradroa eo ho eo izy io ary mampifandray an’i Barcelone sy San Adrián del Besós.
Izy io dia noforonina tamin'ny 2004 miaraka amin'ny famolavolana ny Elia Torres y Jose Antonio Martinez ho foiben'ny Forum iraisam-pirenena momba ny kolontsaina izay natao tamin’io taona io tao an-tanànan’i Katalana, ka izany no anarany. Ary koa ny an'ny tranobe misy marika indrindra: ny Forum, ny asan'ny Jacques Herzog y Pierre deMeuron, izay misy ankehitriny ny Museum of Natural Sciences any Barcelona.
Ny faritra lehibe amin'ny habaka dia anjakan'ny tontonana photovoltaic lehibe, pergolas sasany antsoina hoe Los Pajaritos, ala misy andry ary toerana mahafinaritra maro hanaovana fampisehoana. Saingy, ankoatra izany, dia manana toerana kely roa hafa: ny valan-javaboary Campo de la Bota sy ny Auditoriums.
Kianjan'ny Colon (Madrid)
Ny fijerena ny Plaza de Colón, any Madrid, iray amin'ireo kianja lehibe indrindra any Espaina
Kely kokoa noho ny teo aloha, saingy mahavariana ihany koa ity kianjan'i Madrid ity izay manana 37 metatra toradroa. Eo amin'ny fihaonan'ny arabe Goya sy Génova ary Paseos de la Castellana sy Recoletos no misy azy.
Avy amin'ny zaridaina sy ny tsangambato no nahazoany ny anarany Christopher Columbus izay manjaka aminy. Izany dia mamaly ny fomba neo-Gothic ary naorina tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX. Izy io dia miavaka amin'ny haavony fito ambin'ny folo metatra, na dia ny sarivongana aza, ny asan'ny Jeronimo Sunol amin'ny marbra fotsy, mirefy telo.
Raha ireo voalaza ireo Discovery Gardens, eo ambanin'izy ireo ny Foibem-javakanto Teatra Fernán Gómez, ny Foibe ara-kolontsaina taloha tao amin'ny Villa de Madrid. Efa eny ambonin'ny tany dia afaka mahita tsangambato iray hafa ianao, ilay natokana ho an'ny fahitana an'i Amerika, ny asan'ny Joaquin Vaquero Turcios. Ary koa ny saina espaniola lehibe indrindra eran-tany, miaraka amin'ny velarantany 294 metatra toradroa natsangana tamin'ny tsato-kazo dimampolo.
Farany, eo amin'ny fihaonan'ny kianja amin'ny arabe Génova no misy ny Columbus Towers ary, eo an-tongony, eo amin'ny nosy iray, ilay vehivavy sary sokitra miaraka amin'ny fitaratra, nataon'ilay Kolombiana Ferdinand Botero.
Kianjan'i Espaina (Madrid)
Plaza Espaina, any Madrid
Tsy mandao ny renivohitry ny firenentsika izahay mba hampiseho aminao ny iray amin'ireo kianja lehibe indrindra any Espaina izay saika mahatratra ny teo aloha, satria mirefy 36 metatra toradroa. Mitambatra ao ny arabe Gran Vía, Princesa, Bailén, Ferraz, Leganitos ary Cuesta de San Vicente.
Izy io dia voahodidin'ny tranobe marika maromaro ao an-tanàna. Izany no trangan'ny Tilikambo Madrid, izay manana haavo roa amby efapolo amby zato metatra, dia iray amin'ireo trano avo voalohany teto an-drenivohitra, hatramin'ny nanorenana azy tamin'ny taona 1960. Trano Espaina, izay any amin'ny faran'ny Gran Vía.
Saingy tsy dia miasa noho ireo ary tena tsara tarehy kokoa ny Gallardo House, vatosoa amin'ny modernisme nataon'i Federico Arias King vita tamin’ny 1914. Ary tsy tokony hohadinointsika ny fanorenana ny Royal Asturian Mining Company, hatsaran-tarehy hafa amin'ny alfonsine na eklektika malaza tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX. Farany, tsangambato ho Miguel de Cervantes manjaka ny Plaza de España avy eo afovoany. Izany no asan'ny Rafael Martinez Zapatero and of Lorenzo Coullaut Valera ary maneho ny mpanoratra mipetraka miaraka amin'i Don Quixote sy Sancho mitaingina eo ambanin'ny sariny.
Kianjan'i Espaina (Barcelona)
Ny Plaza Espaina any Barcelona
Manohy ny dianay amin'ireo kianja lehibe indrindra any Espaina izahay amin'ny iray mitovy anarana amin'ny teo aloha any Barcelona. Amin'ny 34 metatra toradroa, kely kokoa izy io, saingy tsy latsa-danja amin'ny kanto. Izy io dia noforonin'ny architects Josep Puig sy Cadafalch y Guillem Busquets, na dia ny tompon'andraikitra amin'ny famitana azy aza dia ho Antoni Darder.
Izy io dia naorina ho an'ny Fampirantiana iraisam-pirenena tamin'ny 1929 toy ny fidirana amin'ny Montjuïc, toerana lehibe hanaovana izany fampirantiana izany. Raha ny marina, ny tsangambato tamin'izany fotoana izany dia mbola voatahiry, toy ny Vohitra espaniola na ny omby tranainy, firavaka neo-Mudejar ny Augustus Font ankehitriny niova ho toeram-pivarotana, ny Tilikambo Venetiana de Ramon Raventos na ny trano heva alemana, mahagaga ny maritrano maoderina noho ny mies van der rohe.
Toy izany koa, eo afovoan'ny kianja dia misy loharano lehibe iray noforonin'ny Jose Maria Jujol ary voaravaka mpanao sokitra Michael Blay y Miquel sy Lucia Osle. Miaraka amin'ny endri-javatra klasika, maneho fanoharana momba ny jeografia sy ny tantaran'i Espaina izy io miaraka amin'ny fanehoana ny ranomasina, ny renirano ary ny toetra mampiavaka azy toy ny Masindahy Teresa an'i Jesosy, Isabel ny Katolika o James I avy any Aragon.
Plaza de Oriente (Madrid), mihoatra ny iray amin'ireo kianja lehibe indrindra any Espaina
Ny Royal Palace, ao amin'ny Plaza de Oriente
Ao afovoan'ny renivohitra Espaniola no misy azy, ary manana 32 metatra toradroa eo ho eo. Ny endriny dia mahitsizoro miaraka amin'ny headboard miolikolika ary noforonin'i Narciso Pascual sy Colomer tamin'ny 1844. Ary koa, angamba io no zava-dehibe indrindra amin'izay nasehonay anao hatramin'izao.
Satria any amin'ny ilany andrefana dia voafaritry ny mahavariana Royal Palace, naorina araka ny baikon'ny Philip V tamin'ny taonjato faha-XNUMX tamin'ny sisa tavela tamin'ny Alcázar taloha. Toy izany koa, any atsinanana dia voaravaka ny Theatre Royal, ny Coliseum Madrid ho an'ny opera izay nisokatra tamin'ny 1850 ary, tany avaratra, ny Royal Monastery of the Incarnation, naorin’ny mpanjakavavy Margaret avy any Aotrisy, vadin’i Filipo II, tamin’ny taonjato faha-XNUMX.
Saingy, ankoatra izany, ny Plaza de Oriente dia miavaka amin'ny zaridainany tsara tarehy. Tsy lazaina intsony ireo noforonin'ny Francesco Sabati, izay tsy an'ny kianja fa an'ny lapa, dia manoro hevitra anao izahay mba hijery ny zaridaina afovoany, ny faktiora baroque, ny any Lepanto y ny an'i Cabo Noval, izy rehetra miaraka amin'ny tarika misy sary sokitra.
Anisan'izany ny tsangambato ho an'i Philip IV nataon'i Pietro tacca, fa koa ny sarivongan'ny mpanjaka espaniola, izay manomboka amin'ny vanim-potoana Visigoth ka hatramin'ny Ferdinand I de Leon. Toy izany koa, ao amin'ny zaridainan'i Cabo Noval dia afaka mahita tsangambato ho an'ity miaramila noforonin'ny Mariano benlliure ary ny an'i Lepanto, iray hafa ho an'ny Kapiteny Melgar, ny asan'ny Julio Gonzalez Pola.
Plaza de Espaina (Seville)
Ity kianja manaitra ity dia natao ho an'ny Ibero-American Exposition tamin'ny 1929. Ao amin'ny zaridainan'i Seville an'i María Luisa no misy azy ary noho ny mpanao mari-trano Hannibal Gonzalez, izay namorona velarana semi-elliptika mirefy 31 metatra toradroa voaravaka tranobe mahavariana mirefy fitopolo amby zato metatra eo ho eo.
Ity endrika ity maneho ny famihin'i Espaina amin'ireo firenena Ibero-Amerikana. Misokatra ho any amin’ny Reniranon’i Guadalquivir mihitsy aza izy io ho lalana mankany amin’ny Kaontinanta Vaovao. Renirano kely mirefy antsasa-kilometatra miampita tetezana efatra ihany koa no mandrafitra azy.
Raha ny tena fanorenana, dia mamaly ny classicist fomba ny palladian villa. Ny fasadeny dia manana haingo seramika mahavariana sy galleries tohanan'ny andohalambo. Ity farany koa dia manana valin-drihana voaravaka tsara amin'ny valindrihana hazo. Farany, eo amin'ny faran'ny trano dia mitsangana ny tilikambo baroque roa mahatalanjona efatra metatra ny haavony, na dia misy vavahady roa aza, ny an'i Navarra sy ny an'i Aragón.
Amin'ny lafiny iray, ny kianja dia misy loharano afovoany, ny asan'ny Vincent Traver and with banky valo amby efapolo misolo tena ny faritany peninsular enina amby efapolo sy ny vondronosy Canary sy Balearic. Nalamina araka ny abidia izy ireo ary eo amin'ny dabilio tsirairay dia misy ny akanjony, ny sariny ary ny taila Pisan miaraka amin'ny hetsika mifandraika amin'ny tantarany.
Ben'ny tanànan'i Medina del Campo
Collegiate Church of San Antolín, ao amin'ny Plaza Mayor of Medina del Campo
Raha miresaka momba ny refy isika dia tsy ho an'ity any Medina del Campo ity ny hibodo an'io toerana io amin'ireo kianja lehibe indrindra any Espaina. Saingy tianay ampidirina izany satria izy no lehibe indrindra amin'ireo lehibe indrindra eto amintsika, manana velaran-tany 14 metatra toradroa ary mihoatra, ohatra, ny an'i Salamanca na Madrid.
Fantatra amin'ny Plaza Ben'ny tanàna de la Hispanidad. Ary tsy misy tokony hitsiriritra ny teo aloha raha ny momba ny sanda lehibe. Satria izy io dia voarafitra amin'ny fanorenana toy ny Town Hall ary ny Trano Arcos sy Peso, izy rehetra tamin’ny taonjato faha-XNUMX. Fa koa ny Royal Palace, ny tranoben'i San José sy Santa María Magdalena na ny Collegiate Church of San Antolin.
Ho fanampin'ny fahalianana dia holazainay aminao fa ny sisin-dàlana samihafa ao aminy dia mitondra anarana toy ny Foal, ny zava-manitra, ny firavaka na ny fitaovam-piadiana araka ny fikambanan'ny vondrona izay nipetraka tao aminy mba hivarotra ny entany. Ary ny fiandohany dia tamin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo, na dia taty aoriana aza ny endrika ankehitriny. Na ahoana na ahoana, ny Ben'ny tanànan'i Medina del Campo dia iray amin'ireo tranainy indrindra eto amin'ny firenentsika.
Ho famaranana, nasehonay anao ny kianja lehibe indrindra any Espaina. Tsy azo ihodivirana, nandao ny hafa tahaka ny Andry Zaragoza, miaraka amin'ny 24 metatra toradroa, ny Castle ao Pamplona miaraka amin'ny 14 na ny anao manokana Plaza Mayor ny Madrid, miaraka amin'ny 12 000 mahery. Tsy heverinao ve fa mahafinaritra toy ny manaitra ireo toerana ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Kianja lehibe indrindra any Espaina